Madaxweynaha Hirshabelle oo taageeray in dowlada Federalka ay siyaasada Dibadda maamusho – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle, Maxamed Cabdi Waare ayaa aaminsan fikir ka duwan Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Puntland iyo KoofurGalbeed dhinaca xiriirka caalamiga ah.
“Xiriirka Caalamiga ah waxaa iska leh Dowlada Dhexe doorka uga furan maamul goboleedyada waa talo bixin waa farsamo waa danahooda iyo mashaariicdooda ay soo gudbiyaan.”ayuu yiri Madaxweyne Waare dhowr maalmood kahor inta aan la dooran isagoo ka qeybgalayay barnaamij dood ah oo loo qabtay musharaxiintii ka qeybgashay tartanka doorashada Madaxweynaha Hirshabelle.
Sidoo kale Madaxweyne Waare ayaa ku taliyay in la dhowro dastuurka dalka u yaala oo qeexaya awoodaha Dowlada Dhexe iyo Maamul Goboleedyada ay kala leeyihiin.
“Waxaa lagu heshiiyay dastuur weli qabyo ah,dastuurkana waxa uu qeexayaa masuuliyada ay leedahay dowlada dhexe,waxa kale oo uu qeexayaa awoodaha ay leeyihiin Maamul Goboleedyada.” Ayuu yiri Madaxweyne Waare.
Wareysi uu sidoo kale siiyay Madaxweyne Waare idaacada VOA laanteeda Afka Soomaaliga ayuu ku sheegay in mowqifka dhexdhexaadnimada dowlada Federalka arrimaha Bariga Dhexe ay wanaagsanaan lahayd in labada dhinac ee iskhilaafsan ay ku qanacsan yihiin balse haddii hal dhinac uu ku qanacsan yahay ay tahay arrin aan wanaagsanayn.
Fikirka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu ka soo horjeedaa tan ay aaminsan yihiin madaxweynayaasha Puntland,Galmudug iyo KoofurGalbeed ee ah inay ka soo horjeedaan go’aanka ay dowlada federalka dhexdhexaadka ugaga noqotay khilaafka ka jira Bariga dhexe.
Madaxda Koofurgalbeed,Puntland iyo Galmudu ayaa dhowaan cadeeyay inay taageersan yihiin dalalka Sacudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta, sidoo kale waxaa go’aankaa hore u taageeray madaxweynihii kalsoonida lagala noqday ee Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cosoble.
Si kasta ha ahaatee waxaan weli mowqfikiisa ku aadan arrinta khilaafka Bariga Dhexe ee ay dowlada federalka iyo dowlad goboleedyada ay ku kala aragti duwan yihiin maamul goboleedka Jubbaland.